यी पाँच गाउँ जसका लागि भयो महाभारत, आज यस्ता छन् ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
यी पाँच गाउँ जसका लागि भयो महाभारत, आज यस्ता छन् !
महाभारतको युद्ध केहि कारणले भएको थियो । जसमा सबैभन्दा ठूलो कारण थियो, भूमी वा राज्यलाई बाँड्ने काम । धेरै प्रयासपछि पनि यसको हल ननिस्किएपछि पाण्डवको तर्फबाट शान्तिदूत बनेर श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गएका थिए । त्यसबेला उनले दुर्योधनसँग पाण्डवका लागि मात्र पाँच गाउँ मागे । तर दुर्योधनले कसैको कुरा नसुनी पाँच गाउँ त के, पाँच पाइला पनि जमीन नदिने बताए ।
यी हुन् पाँच गाउँ
श्रीपतः कतैकतै श्रीपत र कतै इन्द्रप्रस्थको नाम उल्लेख छ । अहिलेको दक्षिण दिल्लीको यो क्षेत्रको वर्णन महाभारतमा इन्द्रप्रस्थको रुपमा भएको थियो । त्यहाँ पुरातत्वविभागले विभिन्न अवशेष फेला पारेको छ । १३२८ ईस्वीमा त्यहाँ संस्कृतको एक अभिलेख भेटाइएको थियो ।
बागपतः यस स्थानलाई महाभारत कालमा व्याघ्रप्रस्थ भनिन्थ्यो । अर्थात् बाघ बस्ने ठाउँ । यहाँ सयौँवर्ष पहिलादेखि बाघ पाइन्थ्यो । त्यहि स्थानलाई मुगलकालमा बागपतको नामले चिनिन्थ्यो । यो उत्तरप्रदेशको एक जिल्ला हो । यो त्यहि स्थान हो जहाँ कौरवले लाक्षगृह बनाएर पाण्डवलाई जलाउने प्रयास गरेका थिए । त्यहाँको जनसंख्या ५० हजार भन्दा धेरै छ ।
सोनीपतः यसलाई पहिला स्वर्णप्रस्थ भनिन्थ्यो । पछि यो सोनप्रस्थ भयो र अहिले सोनीपत भएको छ । यसको मतलव सुनको शहर हो । यो अहिले हरियाणाको एक जिल्ला हो । यसमा साना गाउँ गोहाना, गन्नौर, मुण्डलाना, खरखोदा र राई छन् ।
पानीपतः पानीपतलाई पाण्डुप्रस्थ भनिन्थ्यो । भारतीय इतिहासमा यो एक महत्वपूर्ण स्थान हो ।किनभने त्यहाँ तीन ठूला लडाईं भएका थिए । यसै नजिक छ कुरुक्षेत्र । जहाँ महाभारतको लडाईं भएको थियो ।
तिलपतः यसलाई पहिला तिलप्रस्थ भनिन्थ्यो । यो हरियाणाको फरीदाबाद जिल्लाको एक भाग हो । यो यमुना नदस्ीको किनारमा रहेको छ । त्यहाँ ४० हजार मानिस बसोवास गर्दछन् ।